Otu esi echeghari n'enweghị ihe ize ndụ ma zere Malware - Ntuziaka Site na ihe mgbochi
Onye ọrụ ekwentị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ọ bụla ị na-eji ịntanetị. A na-eji internet na Trojan na nje ndị na-akpata nsogbu dị njọ na ekwentị na data onwe onye nke onye ọrụ ahụ. A na-ekpughe data dị mgbagwoju anya na ndị ọrụ ịntanetị site na nbudata ngwa ngwa ma ghọọ ndị na-agba ọsọ na ndị na-arụ ọrụ na malware ndị nwere ike ịme ohi na njide. Ya mere, ịntanetị chọrọ ka ejiri nlezianya na-eduzi gị mgbe ị na-edebe usoro nche na ngwaọrụ dị egwu eji.
Max Bell, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , na-enye ndụmọdụ dị mfe banyere otu esi echebe nje na malware mgbe ị na-eji ịntanetị na ngwaọrụ gị - donde comprar puff.
Kpachara anya na ihe iji pịa
Mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ bụ ụzọ ndị eji akụ na-eme iji jikọta malware na Trojans na ndị ọrụ ịntanetị. Na ịpị na mgbasa ozi azụ na-agbapụta na weebụ ndị gara weebụ na-echekwa software obi ọjọọ nke nwere nje ma ọ bụ nyochaa ma na-ekere òkè nke ekwentị gam akporo na ndị na-agba ọsọ. Trojan na nje ndị gbakwunyere mgbasa ozi gbasaa na-abata n'ụdị mara mma dị ka software antivol unsolicited. Nọgide na-ele anya mgbe niile.
Emela ihe ọ bụla na iwu akwadoghị
O doro anya na ihe iwu na-akwadoghị na ịntanetị nwere ike ịdị ize ndụ. Ebe nrụọrụ weebụ na-enye faịlụ dị iche iche dị ka egwuregwu vidio, ihe nkiri vidio, egwu, na ngwanrọ nwere ike ịkwado mgbanwe nke malware na nje na ndị nbudata. Ọ dị mkpa ibudata ma ọ bụ bulite faịlụ sitere na saịtị ndị a tụkwasịrị obi iji zere Trojan na obi ọjọọ. Nje Virus na-awagharị na faịlụ ndị na-ezokarị na ebe nrụọrụ weebụ na-akwadoghị faịlụ nwere ike ịzụta na ịkekọrịta ozi nkeonwe site na iji malware dị na nbudata ma ọ bụghị imebi usoro ntinye onye ọrụ. 8)
Nọgidenụ na-edebe ihe nchọgharị ahụ kwa ụbọchị
Iji ihe nchọgharị a na-emegharị na ekwentị emeghe onye ọrụ na-esite na nje na malware. Ikike ike ịlụ ọgụ na Trojan na malware lowers na afọ ya. Ngwaọrụ Android nwere ike izere ọgụ site na nje mgbe ị na-eji ndị dị elu dịka Chrome, Firefox na Opera tụnyere Safari, Internet Explorer na Netscape. Họrọ amamihe na nchekwa dị na ngwaọrụ iji hụ nchebe pụọ na malware na nje.
Lelee ikikere achọrọ
Tupu echichi nke ngwa ebudatara, ngwa ndị ahụ rịọrọ maka ikike dabere na ihe ha kwesịrị ime na ngwaọrụ gam akporo. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ngwa ga-achọ ịnweta kọntaktị, ịntanetị ma ọ bụ igwefoto, ọ dị mkpa ịghọta ihe dị mkpa nke ikikere chọrọ site na otu ngwa. Ikike nke ngwa nwere ike ikpughe ngwaọrụ dị egwu dị iche iche tinyere weebụ gụnyere nje na malware dabere na ikikere rịọrọ ka egosipụtara n'oge echichi.
Jiri ngwa sitere na ụlọ ahịa App
Otu nzọụkwụ na nchekwa site na nje virus na malware na ngwaọrụ smart na-arụ ọrụ gam akporo gam akporo bụ nbudata na iji nke arịrịọ site na recommendable App ụlọ ahịa. Echekwapụta Ngwa dị ka Android Google Play na Amazon Appstore na-enye nchebe dị omimi maka ngwa niile ebudatara na ụlọ ahịa ha. Na nbudata ngwa site na weebụsaịtị ndị na-enye mgbe ụfọdụ na-ere ahịa ka ha na-ekpughe ngwa gam akporo na ọtụtụ nsogbu.
Ngwa nchedo dịka antivirus software nwere ike ikwado nyochaa ngwa ngwa nke ngwa ngwa na malware na ngwa gam akporo mgbe ngwa sitere na isi mmalite.